Izakhiwo eziwusizo zezithelo ezomile
Esikhathini esibandayo, izithelo ezomile zivele zingenakulinganiswa nempilo nokuzizwa kahle. Izithelo ezimile - ukuthola kwangempela izinyo elimnandi: kokubili okuhlwabusayo futhi okuwusizo!
Esikhathini esibandayo, ikakhulukazi ebusika, lapho umgwaqo uhlala unesizungu, ngaphandle kokungathokozi ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke ufuna ukuzitholela okuthile okumnandi futhi okuzuzisa umzimba. Isikhathi sokukhumbula izithelo zomisiwe.
Izithelo ezimile, njengehlobo lokuthengwa kwemikhiqizo, ziyaziwa kusukela ezikhathini ezibucayi. Ukulondoloza izithelo kwakungenzeka kuphela ngokuwomisa elangeni. Kusukela ngaleso sikhathi sekudlule amakhulu eminyaka futhi endlini ngayinye kwakukhona iziqandisisi, izitofu zikagesi, ama-oven microwave nokunye okuningi. Kodwa, naphezu kwakho konke lokhu, izithelo ezomile azange ziye emlandweni, kodwa ziqhubeke zikhona ekuphekeni. Izindlela eziningi zokwenza izithelo ezomisiwe zakhiwe: zazishukela, zavuthwa, zahlanjululwa ngamanzi, njll.
Kungani izithelo zomisiwe zisaziwa futhi zithandwa kakhulu?
Yiqiniso, izindawo eziwusizo zezithelo ezomile. Bayakwazi ukucebisa umzimba womuntu ngamavithamini adingekayo, ngisho nangenkathi ebandayo, lapho izithelo nemifino entsha, ngeshwa, ingatholakali ngaso sonke isikhathi. Izithelo ezomile ziqukethe i-calcium (okudingekayo izinwele, amazinyo, amathambo), i-magnesium (ukuqiniswa kwengcindezi yegazi), i-potassium (edingekayo ohlelweni lwe-cardiovascular), i-sodium nensimbi, i-fiber (ingxenye ebalulekile yokugaya kahle), amavithamini A, B1, B3, B2 , P, B5, B6, njalo njalo.
Yamukelwa ukuhlukanisa izinhlobo eziningana zezithelo ezomile ngezizathu ezahlukene:
konke - izithelo zome ngaphandle kokungenelela kwamagciwane, okungukuthi, amathambo asusiwe futhi ahlukaniswe zibe izingxenye azenzeki;
ihlukaniswe ngesigamu - inqubo yokupheka, ihlukaniswe isigamu sokukhipha itshe.
Futhi futhi omisiwe ngendlela engokwemvelo - ngaphandle kokulondolozwa kwamakhemikhali namakhemikhali, futhi candied - okulungiselelwe ngokungeza isiraphu.
Izinhlobo ezilandelayo zezithelo zomisiwe ziyaziwa kakhulu :
Umvini omisiwe - umkhiqizo ophezulu wekhalori, uqukethe amavithamini B5, B1, B2, kanye ne-magnesium, i-potassium, i-manganese, i-boron, i-iron ne-potassium;
ama-apricot omisiwe - umkhiqizo onama-acids amaningi adingekayo empilweni, kuhlanganise i-apula, i-lemon ascorbic; Ngaphezu kwalokho, iqukethe i-potassium, i-pectin, insimbi namavithamini amaningi;
umlimi ocebile - ocebile nge potassium, calcium, phosphorus, magnesium, sodium, ithusi, i-chromium, i-zinc, i-iodine, amavithamini kanye nama-antioxidants;
izinsuku - umthombo we-sodium, i-potassium, i-magnesium, i-phosphorus, amavithamini B1, PP, B5, E, B6, njll;
cherry - umkhiqizo ocebile nge-vitamin C, i-carotene, i-antioxidants, kanye ne-calcium, i-phosphorus, insimbi, i-zinc ne-potassium;
i-cranberry - iqukethe i-vitamin C, i-citric ne-benzoic acid, i-potassium, i-sodium, i-iron, i-phosphorus, i-zinc kanye ne-manganese;
i-apula - ecebile e-fibre, amavithamini C, B2, A, B1, PP, fructose, boron namaminerali;
i-pear - iqukethe i-sucrose, i-glucose, i-fructose, amavithamini B1, A, B2, P, E, PP, C, i-carotene, i-acids namaminerali;
amakhiwane - aqukethe amavithamini B1, B, B3, C, PP, sodium, calcium, potassium, phosphorus, magnesium, njll;
ubhanana (okomisiwe) - umthombo we-ascorbic kanye nama-asidi wamanoni, i-potassium usawoti, i-endorphins, amavithamini A, B2, E, PP;
i-melon (eyomile) - ecebile e-cellulose, usawoti wamaminerali namaprotheni, insimbi, i-nicotinic ne-folic acid, amavithamini A, C, B;
izithelo ezihlosiwe - lolu hlobo lwezithelo ezomile aluqukethe izinto eziwusizo, ngoba inqubo yokulungiselela ihilela ukwengeza isiraphu noshukela. Noma kunjalo, izithelo ezinamakhadi zihlala ziyi-dessert enomnandi.
Ekuphekeni, izithelo ezomile zifakiwe ekuphekeni kwezitsha eziningi zemikhiqizo ehlukahlukene yamazwe. Futhi izindlela zokupheka zihlukahlukene kakhulu ukuze ukwazi ukuhlangana nesobho ngamabhanana omisiwe, i-melon nezinhlanzi ezisawoti, ngisho nezithelo ezinamakhadi enkukhu.
Izindlela zokupheka ezimbalwa ezilula zisebenzisa izithelo ezomisiwe
Uju ngezithelo zomisiwe. Uju aluzuzi ngalutho ngokuzivikela, umsebenzi wobuchopho kanye nomzimba wonke kunezithelo ezomile. Ngakho-ke, ukulixuba ngezinhlobo ezihlukahlukene zezithelo ezomisiwe, uzothola i-dessert enomnandi eyoba yindinganiso empilweni yakho.
Pilaf ngezingcezu zezithelo zomisiwe. Irayisi yokupheka imizuzu engama-30 phezu kokushisa okuphansi, bese ukhipha amanzi amaningi, engeza izithelo ezomisiwe bese ubeka kuhhavini imizuzu engu-10-15. Izithelo ezinjalo ze-pilaf ziyoba ukunambitheka kwabadala nezingane.
Oatmeal izithelo omisiwe. Wonke umuntu uyazi ngezinzuzo ze-oatmeal porridge, kodwa uma ufaka izithelo zakho ozithandayo ezomisiwe kule phalishi, izinzuzo ziyokhula izikhathi eziningana.
Izithelo ezimile - ukuthola kwangempela izinyo elimnandi: kokubili okuhlwabusayo futhi okuwusizo!
Imikhiqizo ewusizo yokulahlekelwa isisindo
Izimpande ze-Ginger, izithelo ezifakiwe, izakhiwo eziwusizo
Ezakhiweni ezizuzisayo zamaqanda ezigwaca
Ukudla ekunweleni kwe-anemia
Kungani ukudla kwabesifazane kusebenza?
Amafutha emifino ewusizo kakhulu
I-artichoke yaseJerusalema nge izaqathe
Ungadliwa amazambane okupheka
Utamatisi sauce nge thyme
UJamala uzobe emele u-Ukraine nge-Eurovision-2016 ngengoma ngeCrimea
Amaski ebuso obuhle kakhulu
Ukukhipha kwangempela ukushaywa ngeklabishi yasePekinese
Ilayisi nama-alimondi kanye nomvini omisiwe
Ukwelashwa kwama-acne nama-acne
Ukukhathala kwamehlo lapho usebenza kukhompyutha
Ukunakekela izipikili zezingane
Izinkukhu zezinkukhu ziphekwe ngegalikhi kanye no-utamatisi
I-Adenium - i-rose enhle yehlane